Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Jaaliyada Ogadenia ee Sucuudiga Oo Nabad Ku Dhamaaday.
Shirkii Jaaliyada Ogadenia ee Sucuudiga Oo Nabad Ku Dhamaaday.
Shalay oo Jimce ahayd taariikhduna ay ku beegnayd 22 / 4 / 16 waxaa shirkoodii caadiga ahaa isugu yimid jaaliyada s.ogadeniy ee boqortooyada sucuudiga.
Shirka oo ahaa shirkii caadiga ahaa ee Faraca Horseed ayaa furmay abaare 2:00pm xiliga sucuudiga waxaana lagu furay aayadaha qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo ka hadlayay jihaadka iyo cabsida Allaah.
Intaas kadib waxaa warbixin laga dhagaystay Hogaanka Warfaafinta ee jaaliyada wuxuuna hogaanku bulshada ka haqabtiray warbixinada gudaha ogadenia iyo dibadaba isagoo dhagaha bulshada kushubay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Ogadenia kadhacay iyo wararka jaaliyaadka JWXO ee dunida dacaladeeda kahowl gala.
Intaas kadib waxaa khudbado dhaxal gal ah laga dhagaystay qaar kamid ah masuuliyiinta jaaliyada sucuudiga.
Dhinaca kale waxaa kalmado miisaan leh madasha kasoo jeediyay qaar kamid ah kasoo qayb galayaashii shirka waxayna si isku mid ah xubnuhu u cabirayeen sida ugu haboon ee cadawga Dadkeena, Dalkeena iyo diinteenaba looga xorayn lahaa.
Sikastaba ha ahaatee waxaa si habsami ah Kusoo dhamaaday kulankii waxayna xubnuhu ahaayeen kuwo ku faraxsan isu imaatinka noocan ah.